जीवन शैली Archives -
वर्ग: जीवन शैली
लकडाउनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडिबुटीको खपत बढ्दो
२०७७ श्रावण २६, सोमबार १२:०९ गते अगस्ट 10, 2020 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on लकडाउनमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडिबुटीको खपत बढ्दो
दर्शन आचार्य कोरोना भाइरसको संक्रमण थपिने क्रम जारी थियो । जेठको मध्यतिर स्याङ्जाको एक क्वारेन्टिनमा नियमित गर्जाेको झोल खुवाउन थालियो । नेपाल सरकारको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको प्रोटोकल अनुसार नै त्यस्ता जडीबुटी खुवाउन थालिएको थियो । सरकारले तयार पारेको सो निर्देशिका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय आयुर्वेद […]
नुन नखाँदा के हुन्छ
२०७७ श्रावण ९, शुक्रबार १५:३७ गते जुलाई 24, 2020 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on नुन नखाँदा के हुन्छ
अहिले हाम्रो भान्सामा जुन नुन चलनचल्तीमा छ, त्यसलाई टेबल साल्ट वा सफा नुन भनिन्छ । यसलाई सोडियम क्लोराइड भनिन्छ, जसमा सोडियम र क्लोरिनको मिश्रण हुन्छ । नुनमा पाइने सोडियम हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक तत्व हुन् । यसले शरीरमा पानीको मात्रालाई नियन्त्रित राख्न मद्दत गर्छ । सोडियमले मांसपेशीलाई सक्रिय बनाउँछ । मस्तिष्कदेखि शरीरका अन्य अंगसम्म सूचना […]
पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने
२०७७ श्रावण ९, शुक्रबार ११:३२ गते जुलाई 24, 2020 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on पाचन प्रणाली कसरी राम्रो बनाउने
विशेषज्ञका अनुसार बिहान पेट सफा नहुनुको कारण हाम्रो खानपान र दिनचर्या हो । यदि हामी समयमा स्वस्थकर खाना खान्छौं भने कुनै औषधी नखाई पनि समस्या समाधान हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राति सुत्नुभन्दा तीनघन्टा अगाडि नै खाइसक्नुपर्छ । अन्यथा क्यालोरी बर्न हुन पाउँदैन । खानामा फाइवरयुक्त कुराहरु अत्यधिक सेवन गर्नुपर्छ । यसबाट आन्द्राको राम्रोसँग […]
तिउरी : औषधीय गुण
२०७७ श्रावण ४, आईतवार १५:०१ गते जुलाई 19, 2020 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on तिउरी : औषधीय गुण
नेपाली परम्परा अनुसार लुतो फाल्ने र तिउरीको बोट लगाउने चलन निकै पहिलेदेखि चलिआएको पाइन्छ । असारमहिनामा हिलोका कारण शरीरमा आउने एक किसिमको रोगलाई साउन १ गते विधिपूर्वक विभिन्न वनस्पतिको प्रयोग गरी लुतो फाल्ने गरिन्छ । यही दिन एउटा पुरानो संस्कारको रूपमा तिउरीको बिरुवा लगाउने चलन समेत रहेको छ । यस परम्पराको पछिको वैज्ञानिक कारणको खोजी […]
डान्सवाटै चर्चा कमाउन सफल रोमा
२०७६ श्रावण १०, शुक्रबार १९:१० गते जुलाई 26, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on डान्सवाटै चर्चा कमाउन सफल रोमा
सुमन कार्की पाल्पा, रोमा न्यौपाने नाम (एउटा खुट्टाले डान्स गर्ने कलाकार) भन्ने वितिकै पछिल्लो समय नसुन्ने र नचिन्ने सायदै कम हुनुन्छ होला देश तथा विदेशमा । पछिल्लो समय कुनै घटना होस ,ब्यक्ती वा गाएक गायीका, डान्सर, डान्स लगाएत युवटुवमा भाइरल हुने चलन मौलाउदै गएको छ । केही बर्ष अगी युवटुववाटै भाइरल बन्दै आएकी इटहरीकी चेली […]
निर्धक्क रुनुहोस् ! रुँदा बेफाइदा हुँदैन
२०७५ फाल्गुन ३, शुक्रबार १४:४३ गते फ्रेवुअरी 15, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on निर्धक्क रुनुहोस् ! रुँदा बेफाइदा हुँदैन
‘लोग्नेमान्छे भएर, रुन हुन्न रे ।’ आँखाबाट आँशु बगाउनुलाई हामी कमजोरी वा नामर्दपन ठान्छौं । जबकि रुनु भनेको शरीरको एक स्वाभाविक र प्राकृतिक क्रिया हो । तर, यो शारीरिक क्रिया भए पनि भावनासँग जोडिएको विषय पनि हो । जब हामी दुःख-बोध गर्छौं, हामी रुन्छौं । जब कुनै अनपेक्षित सुख प्राप्त हुन्छ, हामी रुन्छौं । सुखमा […]
२०७५ माघ २८, सोमबार १४:३५ गते फ्रेवुअरी 11, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on तपाईंको थालमा कस्तो परिकार हुनुपर्छ ?
त्यही थालको परिकार, जसले तपाईं निरोगी बनाउँछ । त्यही थालको परिकार, जसले तपाईंलाई रोगको भण्डार बनाउँछ । जब तपाईं जिब्रोको चक्करमा फस्नुहुन्छ, तपाईंको थालमा अस्वस्थ्यकर भोजन समावेश हुन्छ । जब तपाईं स्वास्थ्यप्रति सर्तक रहनुहुन्छ, तपाईंको थालमा स्वस्थ्यकर भोजन समावेश हुनेछ । त्यही भोजन हाम्रो लागि विष बन्छ र त्यही भोजन हाम्रो लागि अमृत बन्छ । […]
तिलिचो तालको सौन्दर्य
२०७५ माघ २८, सोमबार १४:२९ गते फ्रेवुअरी 11, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on तिलिचो तालको सौन्दर्य
नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि चार हजार नौ सय १९ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । ताल वरिपरि मुक्तिनाथ, तिलिचो हिमाल, नीलगिरि हिमशृंखलाले ताललाई मनमोहक र आकर्षक बनाएको छ । तिलिचो ताल माथिल्लो मनाङबाट करिब ४५ किमी दूरीमा पर्छ । काठमाण्डौबाट लमजुङको बेँसीशहर हुँदै मनाङको खाङसारसम्म गाडीमा जान सकिन्छ । बेँसीशहरबाट एकै […]
कुन रोग छ भन्ने नङको रङ हेरेरै थाहा हुन्छ
२०७५ माघ ४, शुक्रबार १०:४८ गते जनवरी 18, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on कुन रोग छ भन्ने नङको रङ हेरेरै थाहा हुन्छ
नङको काम हात-खुट्टाका औलाको सौन्दर्य बढाऊने मात्र होइन । यसले शरीरभित्र लुकेर रहेका बिभिन्न रोग’bout संकेत पनि दिने गर्छ । नङमा आउने रङको परिवर्तनले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य’bout जानकारी दिन्छ भन्ने । यदि नङमा सेतो दाग, गुलाबीपना या धर्सो देखिएमा त्यो कुनै गम्भीर रोगको संकेत पनि हुन सक्छ । लिभर, मुटु, फोक्सो, छाला एवं मानसिक […]
लगातारको खोकी क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ
२०७५ पुष २८, शनिबार १०:५८ गते जनवरी 12, 2019 पाल्पा खबरप्रतिक्रिया दिनुहाेस on लगातारको खोकी क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ
चिसोमा खोकी लाग्छ, रुघा लाग्छ । हामी ठान्छौं, चिसोको कारण यस्तो भयो । स्वभाविक हो, चिसोले खोकीको मसस्या निम्त्याउँछ । तर, खोकी लाग्नुमा चिसो मात्र कारण हुँदैन । यदि लगातार खोकी लाग्छ भने शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । ’cause सामान्यतः चिसोमा खोकीको समस्या धेरै हुने गर्छ । यस्ता खोकी पाँच देखि सात दिन भित्रमा आफै निको […]